Izinkampani ezimbili zezindaba kuleli zihlawuliswe u-R5.8m | News24
LAST UPDATED: 2018-11-14, 15:54
Izinkampani ezimbili zezindaba kuleli zihlawuliswe u-R5.8m
Cape Town – Izinkampani ezimbili zokushicilela zakuleli i-Independent Media kanye ne-Caxton & CTP Publishers and Printers zivumile ukukhokha inhlawulo engaphezu kuka-R5m.
Lezi zinkampani zihlawuliswe ngenxa yokuthi zavuma ukuthi zisebenza ngokubambisana.
Ngokusho kwesitatimende sekhomishini yezokuncintisana ngoLwesihlanu, lezi zinkampani zivumile ukukhokha inhlawulo lenani lika-R5.8m mayelana nophenyo olwenziwa ngoNovemba 2011.
OLUNYE UDABA:Azehlanga kahle ezimakethe izindaba zokungabekelwa kukaZuma umnqamulajuqu
Lezi zinkampani zivume ukukhwabanisa amanani okusebenza, kanti uphenyo lwekhomishini luthole ukuthi lezi zinkampani zavumelana ukuthi zizonikezela ngamanani aphansi afanayo kubakhangisi abafaka izikhangiso ezinkampanini zazo.
Lezi zinkampani zazinikeza amalungu azo isaphulelo samanani esingu-16.5% kuthi labo abangewona amalungu banikezwe isaphulelo sika-15%.
"Lokhu bekwenza kubenzima ukuncintisana nezinye izinkampani ebezingeyona ingxenye yalokhu futhi ebezingenawo amandla okwehlisa amanani ngale ndlela ukuze kusetshenzwe ngokufana kule mboni," kusho ikhomishini.